Digniin laga soo saaray Coronavirus oo ku wajahan Soomaalida UK | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Digniin laga soo saaray Coronavirus oo ku wajahan Soomaalida UK
Digniin laga soo saaray Coronavirus oo ku wajahan Soomaalida UK
Digniin caafimaad oo la xiriirta ka hortagga caabuqa COVID-19 ayaa loo jeediyay Soomaalida ku dhaqan Britain, ka dib markii ay soo bateen Soomaalida uu soo ritay caabuqaasi.
Dr. Cabdikhani Cismaan Yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee degan Magaalada London, sidoo kalena ka mid ah dhakhaatiirta toddobadyadii la soo dhaafay ku mashquulsanaa kiisaska la xiriira Coronavirus ayaa digniin u jeediyay Soomaalida UK.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan si gaar ah horta ula hadlo dadka UK joogga, oo aan ogahay in dad badan aynaan taladii dowladda weli aad ugu dhaqmeynin, ee is ilaalintii. Run ahaantii xaaladda UK waxaa la fillaya inay faraha ka baxdo toddobadyada soo socda, dhimashadana inay badato.” Ayuu yiri Dr. Cabdikhani Cismaan Yuusuf.
Waxa kaloo uu yiri”Dad badan waxay London ku arkayan guryahooda agtooda iyo meelo u dhow in laga dhisay meelo cad-cad oo waaweyn, horey u jiri jirin, waana la bilaabay.”
Goobahan ayuu sheegay in loo dhisay toddobadyada ina soo aadan in lagu uruuriyo meydadka, oo sida uu ka dhawaajiyay ay isbitaaladu qaadi la’yihiin.
Sidoo kale xaaladan ka taagan Boqortooyada Britain ayuu qeexay in looga gudbi karo, iyadoo ay dadka ku nagaadaan guryahooda, isla-markaana ay nadaafadooda ku dadaalaan.
“Taas waxaa loo dhisay meydadka in lagu uruuriyo toddobadyada soo socda, isbitaaladu ay qaadi la’yihiin. Marka xaaladda aad iyo aad bay halis u tahay, sida keliya ee looga badbaadayaana waa gurigaaga joog, nadaafadaadana ilaali.” Ayuu yiri dhakhtarka oo lagu wareystay Barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha ee ka baxa VOA.